Lynn Theik Nyut | Dedaa.com.mm
Myanmar! What do you want to learn
SIGN IN ၀င်ရန်
Financial and Investment
Lynn Theik Nyut
Lynn Theik Nyut (Myanmar's Land)
Fuel Your Professional with Positive Energy
Interpersonal Skills For Effective Leaders
Duration:4 minutes and 57 seconds
လူမှု့ဆက်ဆံရေး ( Communication )ဆိုတာ ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပက်သက်နေတာလဲ ဘာကြောင့် အရေးကြီတာလဲ ??? လူမှု့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ၊ လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာ ၊ ခေါင်းဆောင်မှု့တိုင်းမှာ ( Communication ) ရဲ့ အရေးပါပုံတွေကို အခုဒီ လေးမိနစ် (4Minutes ) စာ Video အတွင်းမှာ ဆရာလင်းသိုက်ညွှန့်( မြန်မာ့မြေ ) မှ Dedaa မှတစ်ဆင့် အခုလို ပြောကြားပေးထားပါတယ် ။
မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် မိမိရဲ့ အလုပ်အကိုင် (Professional )၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု့( Career Life ) ကို အပြုသဘောစွမ်းအားနဲ့ ဘယ်လို မြှင့်တင်ကြမလဲ ??????
လုပ်ငန်းခွင်တိုင်း ၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ အခက်အခဲ ပြဿနာဆိုတာ အမြဲတမ်းတွေ့ရမယ့်အရာတစ်ခုပါ ။
ဒါပေမယ့် ပျော်ရွှင်မှု့ဆိုတာဟာလည်း လူတိုင်း ၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရှိပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ Professional တိုင်း ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း ဟာ ပြဿနာမတွေ့တဲ့ သူတွေမဟုတ်ပါဘူး ။ပြဿနာ ကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ ဆိုတာကို သိတဲ့ သူတွေသာဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာ ဆိုတာ မရှိဘဲနဲ့ အခွင့်အလမ်း ဆိုတာ လည်း ရှိမလာနိုင်ပါဘူး …………..
ပြဿနာတိုင်း ကို ဖြေရှင်းရင်းနဲ့သာ မိမိ အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာစမြဲ ပါ ။
ဒီတော့ လူတိုင်း အခက်အခဲ ပြဿနာတိုင်း ကို အပြုသဘောနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပြီး ပျော်ရွှင်နိူင်မလဲ ဆိုတာ ကို ဒီ သုံးမိနစ် (3Minutes) စာ Video အတွင်းမှာ ဆရာလင်းသိုက်ညွှန့်( မြန်မာ့မြေ ) မှ အခုလို သုံးသပ်ပြောကြားပေးထားပါတယ်။
© 2019 Dedaa.com.mm